I-India iindiza zamanye amazwe: ukunqunyanyiswa okwandisiweyo kuyatshabalalisa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » I-India iindiza zamanye amazwe: ukunqunyanyiswa okwandisiweyo kuyatshabalalisa
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Iindiza zamazwe aphesheya zaseIndiya
UMongameli woMbutho waseIndiya wabaSebenzi boKhenketho (IATO), uMnu Rajiv Mehra, uvakalise ukudana kwakhe okukhulu ngesigqibo esenziwe yi-India Ministry of Civil Aviation / DGCA yokwandisa ukumiswa kweenqwelomoya kwilizwe liphela kude kube nguSeptemba 30, 2021, kunye I-Visa yabakhenkethi.
UMongameli we-IATO ubongoze ukuba lixesha lokuba urhulumente angenelele kwaye ancede ishishini lokuhamba nezokhenketho.
Umnumzana Mehra ebenyanzelisa ukuvulwa kwe-visa yabakhenkethi okwethutyana ixesha elithile ngoku.
Ukongeza, umbutho wakhe konke oku kungunobangela wokuqalisa kwakhona kweenqwelomoya kunye nokucacisa ukuba kungenziwa njani.
Uthe amalungu e-IATO adandathekile kwaye adimazekile sesi sigqibo sithathwe ngurhulumente. Umnumzana Mehra uthe: “Lixesha lokuba urhulumente ancede ishishini lezokhenketho ngokuvuselela ukhenketho olungena eIndiya,” echaza ezi zicelo zilandelayo ziye zenziwa kurhulumente.
UMnu Rajiv Mehra, Mongameli, IATO
-Ukuvula ifayile ye- I-Visa yabakhenkethi Bonke abo bakhenkethi bamanye amazwe abagonyiwe kwaye banqwenela ukuza eIndiya. Vumela abakhenkethi bamanye amazwe bathathe isigqibo sokuba bafuna ukuya e-India okanye hayi. Akufuneki sibathintele ukuba baye e-India, xa amanye amazwe evule iingcango zabo kubakhenkethi.
-Kwangokunjalo, imisebenzi yesiqhelo yenqwelomoya yamazwe aphesheya kufuneka iphinde iqale, kwaye vumela iinqwelomoya ukuba zenze isigqibo sokuba ziyafuna okanye azifuni kusebenza ukuba akukho sithintelo somthwalo. Kodwa urhulumente kufuneka avumele ukuqala kwakhona kweenqwelomoya.
Onke amanye amacandelo alivuselele ishishini lawo ngenkxaso evela kuRhulumente wase-India, kwaye kuphela ngumzi-mveliso wokhenketho nokhenketho osokolayo ukuba usinde kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo ngaphandle kokufumana isiqabu kwaphela. Umongameli we-IATO ubongoze ukuba urhulumente kufuneka axhase ishishini lezokhenketho ngakumbi abaqhubi bezokhenketho abangenayo abaneshishini elingazinzanga ukusukela nge-Matshi 2020.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, Mnu. Mehra, uthathe inxaxheba kwi Intlanganiso ebizwe nguMphathiswa weZorhwebo noShishino, Shri Piyush Goyal, ukufumana igalelo kubathumeli mpahla ngaphandle kumanyathelo afanelekileyo aza kuthathwa kwikhwelo leNkulumbuso lokonyusa ukuthunyelwa kwelinye ilizwe
Kule ntlanganiso, uMnu. Mehra ucebise amanyathelo afanayo okuvumela ii-visa zabakhenkethi kunye nokuphinda uqalise ukusebenza kweenqwelomoya kwilizwe liphela. Uye waphinda wacacisa kuMphathiswa malunga nemeko yemeko yezemali ababenayo abaqhubi bezokhenketho ngexesha lendyikityha yokufa kunye nendlela ukukhutshwa kwe-SEIS ekudala kulindelwe (iiNkonzo zokuThunyelwa kwamanye amazwe kwi-India Scheme) kunyaka-mali ka-2019-20 kubalulekile ukuze baphile.